အသစ်အဆန်းသည်ဆုလာဘ်များမျှော်လင့်နေစဉ် sustia nigra / ventral tegmental (ရိယာ၏ mesolimbic အလုပ်လုပ်သောဆက်သွယ်မှုကိုတိုးပွားစေသည် - မြင့်မားသော resolution fMRI မှသက်သေအထောက်အထား - ၂၀၁၁ သင်၏ ဦး နှောက်သည်
high-resolution fMRI (2011) မှအထောက်အထား: အသစ်အဆန်းဆုလာဘ်မျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း substantia nigra / ventral tegmental ဧရိယာ (SN / VTA) ၏ mesolimbic functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုတိုးပွါး
comments: ဆုလာဘ်၏မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်အသစ်အဆန်းပိုပြီးကြီးမားတဲ့ဆုလာဘ် circuit ကိုအတွင်းသီးခြားဆားကစ်အပေါ်အားကိုး။ ပေါင်းလိုက်သော activation ဦးနှောက်ထဲသို့စိတ်လှုပ်ရှားအချက်ပြမှုများနှင့်ဝါယာကြိုးများအတွေ့အကြုံချဲ့ထွင်။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသစ်အဆန်း၏မျှော်လင့် = ။
Neuroimage ။ 2011 စက်တင်ဘာ 15; 58 (2): 647-55 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroimage.2011.06.038 ။ EPub 2011 ဇွန် 24 ။
Krebs RM, Heipertz: D, Schuetze H ကို, Duzel E ကို.
စမ်းသပ်စိတ်ပညာဌာန, ဂျန့်မြို့မှာတက္ကသိုလ်, 9000 ဂျန့်မြို့မှာ, ဘယ်လ်ဂျီယံ။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
ဆုလာဘ်များနှင့်အသစ်အဆန်းပြင်းထန်စွာ dopaminergic midbrain တုံ့ပြန်မှုအပေါ်အားကိုးကြောင်းအစွမ်းထက်သင်ယူမှုအချက်ပြမှုများများမှာ.
မကြာသေးမှီကတွေ့ရှိချက်များကိုဆုလာဘ်များနှင့်အသစ်အဆန်းအပြန်အလှန်ဖို့များပါတယ်သော်လည်း, နှစ်ဦးစလုံးရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကွဲပြားအာရုံခံပြွတ်အားဖြင့် subserved စေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ကျနော်တို့ reward- နှင့်အသစ်အဆန်း-ဆက်စပ်လှုပ်ရှားမှု၏ Spatial delineation နှင့်ပေါင်းစည်းမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရှုပ်ထွေးလူ့ substantia nigra / ventral tegmental ဧရိယာ (SN / VTA) အတွင်းဆုချမှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုခွဲထုတ်ဖို့က high-resolution ကိုအလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) အသုံးပြုအသစ်အဆန်း ပြွတ်။
ကျွန်တော်တို့သည်ထို medial SN / VTA ၏ caudal တစျပိုငျးကိုနှင့်လက်ျာ SN များ၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဘို့ကိုအတွင်းကွဲပြားပြွတ်အများစုဆုလာဘ်တွေရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဖြင့် modulated ဖြစ်ကြောင်းသရုပ်ပြ wအဆိုပါ medial SN / VTA တစ်ဦးထက်ပိုသော rostral အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသီးသန့်အသစ်အဆန်းများက modulated ခဲ့သည် hile ။
ထို့အပြင် caudal medial SN / VTA စပျစ်သီးပြွတ်ဘယ်မှာအသစ်အဆန်းရွေးချယ်တိုးမြှင့်ဆုလာဘ်-မျှော်လင့်တုံ့ပြန်မှုအသစ်အဆန်းများနှင့်ဆုလာဘ်များအကြားတစ်ဦးအပြန်အလှန်ခံပြီး။ ဒါဟာအပြန်အလှန်, အလှည့်အတွက်ဤ SN / VTA တိုင်းဒေသကြီးများ၏ functional-ဆက်သွယ်မှုပုံစံများအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုများက paralleled ခဲ့သည်။
အထူး အကျွမ်းတဝင်ဆုလာဘ်-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်လှုံ့ဆော်မှုနှိုင်းယှဉ်ပါကဝတ္ထုပုနျူကလိယ accumbens နှင့် hippocampus အပါအဝင် mesolimbic ဒေသများနှင့်အတူ medial SN / VTA ၏ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုတိုးမြှင့်အဖြစ်မူလတန်းအမြင်အာရုံ cortex အတူ။
ဒီ function ဆက်စပ်မှုဟာ medial SN / VTA ၏ afferents အသစ်အဆန်းများနှင့်ဆုလာဘ်အကြောင်းကို Integrated သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးစွမ်းသို့မဟုတျ, တနည်းဘယ်လို medial SN / VTA လှုပ်ရှားမှုဆုလာဘ်နဲ့ဆက်စပ်ဝတ္ထုဖြစ်ရပ်များအတွက်မှတ်ဉာဏ်ဖြစ်စဉ်များ modulate ဖြစ်နိုင်သည်ကိုမည်သို့မီးမောင်းထိုးပြလိမ့်မည်။